Iziko leDatha lokupholisa ababoneleli kunye neFactory - Iziko leDatha lokupholisa iChina Abavelisi
I-SpaceShields® uchungechunge oluchanekileyo lwe-air conditioners lubonelela ngezisombululo ezikhuselekileyo, ezithembekileyo, ezisebenzayo, ezisingqongileyo kunye nezichanekileyo zokupholisa kwigumbi lekhompyutha enkulu kunye nobukhulu obuphakathi kunye nokubonelela ngeyona ndawo ifanelekileyo kubandakanywa ubushushu, ukufuma kunye nokucoceka, njl. kwizixhobo kunye nokuqinisekisa ukuzinza. ukusebenza kwesixhobo kangangeentsuku ezingama-365*24hours.
I-RowShields® series InRow air conditioner ikufutshane ekupholiseni iikhabhathi zeseva. Ibonelela ngesisombululo esikhuselekileyo, esithembekileyo, esisebenza kakuhle kunye nohlaza ngokuchaneka kokupholisa kwiziko ledatha loxinzelelo oluphezulu lwe-thermal kubushushu, ukufuma kunye neenkonzo zolawulo lococeko.
I-MicroShields Air conditioner ye-Shelter kunye ne-Base station
I-MicroShields® i-airconditioner yochungechunge ibonelela ngegumbi elincinci kunye neliphakathi le-server elinendawo ekhuselekileyo, ethembekileyo, eyonga amandla, indalo kunye nesisombululo esichanekileyo sokupholisa.